AADDE RAABIYAAN MASKIIDA DHALAAF DHIIRA WALFAANA SAGACHIISU – Kichuu
HomeAfaan OromooAADDE RAABIYAAN MASKIIDA DHALAAF DHIIRA WALFAANA SAGACHIISU
AADDE RAABIYAAN MASKIIDA DHALAAF DHIIRA WALFAANA SAGACHIISU HUNDEESSITE.
1. Akka dubbiin VOA Afaan Oromoo har’aan kana jabaa nuun jedhetti, Masjiida Dhiiraa fi Dubartiin Bakka Tokkotti Walkeessa Itti Salaatantu yeroo jalqabaaf hundaa’e. Kun akka seera amantichaatti hin amaleeffatamne. Raabiyaa Kubeel amantaa Islaamaa oggaa kudhan dura fudhatte. Dhiheenya kana masjiida haaraa Yunaaytid Isteets godina Kaalifoorniyaatti banteetti. Manni amantichaa Duukaa buutota argataa laataa? Waa’ee kanaawoo Quraanni Qulqulluun maal jedha? Mee uummanni keenya Oromoo amantii Isilaamaa hordoftan waan kana nuuf qulqulleessa. Sabni keenyaa kana mata duree godhatee utuu hinka’iin barumsa sirreessaa dursanii kennuun barbaachisaadha.
2. Yeroo ammaa kana addunyaan yaada walxaxaafi hiikamaan guuteen socho’aa jirti. Bara itti dhalli namaa hundi akka tokkootti lakkaa’amurrallee darbee bineensi bosonaafi manaallee seera qabaatee nagaan itti socho’aa jirudha. Bara itti waan hundaa ija qalbiitiin ilaalludha.Yaadni haaraan tokko yeroo abuuramu gatii nama kaffalchiisa jedheen yaada. Dubartiin kun biyya Amarikaa biyya mirgi amantiifi dubbii nama kamiiyyuu kabajamu keessa utuu hinjiraannee maaltu isheerra gaha laata? Keessumattuu yaadotiin haaraan akkanaa Oromiyaafi Ardii Afriikaa keessatti utuu ta’ee maaltu isheerra gaha laata?
3. Waa’ee mirga walqixa qabaachuufi dubartoonni luba/Pastor ta’uu, waldaa kiristaanaa geggeessuufi kkf Waldaan Amantootaa (Kiristaanotaawoo) maal jedha laata?
4. Akka aadaa Oromoottis Ateetee kan jedhamu jira. Sirni sun maalirratti xiyyeeffata? Dubartoonni Oromoo sirna Gadaa keessatti iddoo akkam akkamii qabu? Maal irratti hirmaatu? maalirratti ammoo hin hirmaatani? maaliif?
Waan haaraa addunyaan kun as baastu kanarraa hundi keenya haabarannu. Sammuu bilisaan haa marmiyannu maleemmoo yaada fokkisaafi arrabaan guute sana gadi hinguuriina. Bilisummaan jalqabaa sammuu ofii bilisoomsuudha.
Waa’ee moggaasa Masjiida kana maaltu akka adda isa godhuufi kaayyoo manni amantaa kun hundaa’eef gabaabinatti hidhaa VOA Afaan Oromoo kanaa gadii kana tuquun dhaggeeffadhaa
Via : Beekan G Erena
Masjiida Dhiiraa fi Dubartiin Bakka Tokkotti Walkeessa Itti Salaatan
Raabiyaa Kubeel amantaa Islaamaa oggaa kudhan dura fudhatte. Dhiheenya kana masjiida haaraa Yunaaytid Isteets godina Kaalifoorniyaatti banteetti. Masjiida kana maaltu adda godha? Dhaggeeffadhaa. Religion Oromo Ethiopia
Qophii Qaanqee Show : Gaafi fi deebi Obbo Birhanu Feyisa WBO waliin